Zoom Ankorondrano : Efa mampiasa herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro -
AccueilRaharaham-pirenenaZoom Ankorondrano : Efa mampiasa herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro
Notanterahina omaly ny fitokanana ny ivon-toeram-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro, na ny “Centrale Solaire Photovoltaïque” etsy amin’ny Zoom Ankorondrano. Tonga nanatrika izany fotoana izany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nandritra ny lahateny nataony no nilazany fa tetikasa lehibe izay anisan’ny miavaka, ary mifanaraka indrindra amin’ny tetikasam-panjakana eo amin’ny sehatry ny angovo izany, no sady mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Ny iray ampahatelon’ny fandaniana herinaratra ao amin’ny Zoom Ankorondrano dia voasahan’ity fahazoana herinaratra vaovao, vao avy notokanana ity. Mahatratra hatrany amin’ny 130 Kw ny tanjany, ary 700 m2 kosa no velaran-tany nametrahana ireo “panneaux solaires” izay miisa 420. “ Manan-karena masoandro i Madagasikara, ary rariny raha ampiasaina hamokarana herinaratra izany. Telo volana monja anefa no nametrahana izany fotodrafitrasa izany. Afaka mamatsy tena ny mpampiasa azy, ary hanatsara ny fitantanana ara-bola eo amin’ny orinasa Jirama izany, satria hihena ny fatiantoka, ary hihena ihany koa ny vola omen’ny fanjakana ny Jirama. Endrika iray manamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ihany koa ny tahaka izao, satria samy mahazo tombontsoa ny tsirairay”, raha araka ny fanazavana nentin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina hatrany. Nampirisika ireo sehatra tsy miankina, indrindra ny orinasa Green Yellow hanohy hatrany ny ezaka nataony araka izany ny Filoha satria mitondra fampandrosoana ho an’i Madagasikara tokoa izany. Nitentina 1 miliara Ariary moa ny vola nampiasaina teo amin’ny fanatanterahana izany tetikasa izany.
Fanafoanana ny fahatapahan-jiro
Naneho ny heviny mikasika ny fahatapahan’ny herinaratra eto an-drenivohitra ihany koa ny minisitry ny Angovo, Lantoniaina Rasoloelison. Nambarany tamin’izany fa raha ny tokony ho izy dia foana tanteraka fahatapahan-jiro, saingy anisan’ny mbola sakana ho amin’izany ny fisian’ny halatra tariby. Mahatratra hatrany amin’ny 20 kilometatra mahery moa ireo tariby efa very. Etsy andanin’izay, misy ihany koa ireo izay mangalatra herinaratra amin’ny alalan’ny fifandraisana mivantana, na ny “branchement parallèle”. Manainga ny isa-tokantrano ny orinasa Jirama araka izany mba samy ho mailo manoloana ny halatra etsy sy eroa. Raha samy mitandrina sy miala amin’ny endrika fanararaotana tokoa mantsy ny tsirairay dia tratra ilay tanjona kendrena amin’ny taona 2020, dia ny fifandanjana eo amin’ny lafin’ny famokarana, izany hoe, mahasahana ny fandaniana ho an’ny famokarana ny vola miditra avy amin’izany.